Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay xidhiidhka u dhaxeeya isaga iyo Guddoomiyaha Golaha Guurtida | Somaliland.Org
December 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa ka hadlay xidhiidhka u dhaxeeya isaga iyo Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan. Waxaanu ku andacooda in Xukuumaddiisu aanay wax farogelin ah ku haynin Golahaas.
Madaxweyne Rayaale oo maanta u waramay Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA, ayaa mar la waydiiyay talada Xukuumaddooda uga meel taala dhalinyarta ka tahriibaysa Somaliland, maadaama ay hore badaha ugu naf-waayeen dhalinyaro aad u tiro badan, ayaa wuxuu sheegay in aanay ahayn masuuliyad saaran Xukuumaddiisa, waxaanu eedda tahriibta dhalinyarta dusha ka saaray Waalidiinta dhalay dhalinyarta tahriibka u hollata. “Horta, Somaliland maalintii ay soo bilaabantay ee 1991-kii maanta ayay ka nolol fiican tahay, Afrika oo dhan baa guuraysa ee Somaliland xannuun gaar ah oo ku dhacay maaha, balse waxaan isleeyahay Somaliland imika ayay bilowday guuritaanka oo dadkaa guuraya ayay ka mid yihiin, belaayo wayn oo eryaysa ma ogi. Laakiin, waxaan kuu sheegayaa dadka inta badan tahriiba waxa u badan dad inta badan Lacag haysta oo dadkoodu diro. Waxaan dadkaa ku waaninayaa mustaqbal fiican baa u soo socda dalkeena ee aynu aamino oo aynu joogno, Caruurta badda ku dhimanaysa waalidka dirayana waxaan leeyahay, Caruurta ha dirina oo laba isku heli maysaan, in aad Doonnida saartaan iyo in aad marka uu dhintana aad calaancal halkan (Somaliland) la joogtaan..Qof waliba waa sida uu mustaqbalkiisa u arko, maaha wax ay Dawladda Masuuliyad gaar ahi ka saaran tahay. Laakiin, dawladdu farrinta ay u gudbinaysaa waa waddankiina aamina.” Ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale.
Waraysigan oo qayb ka mid ah Somaliland.Org idiin soo qortay, ayaa dhinaca kale mar wax laga waydiiyay farogelin la sheegay in Xukuumaddiisu ku hayso Golaha Guurtida oo ay ku doonayso in xilka lagaga qaado Guddoomiyaha Golahaas Saleebaan Maxamuud Aadan, wuxuu dedafeeyay jiritaanka warkaas. Waxaanu sifeeyay xidhiidhka ka dhaxeeya isaga iyo Guddoomiyaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo hadda safar dibedda ah ku maqan. “..Wax wayn oo Golahaas ka socda oo golaha dhexdiisa iyo dawlad ka socda toona ma ogi, waxaana Golahaas u socda fadhigoodii. Dawladdu wax alla wax shaqo ah oo ay ku leedahay golayaashu ma jirto, waanay madax-bannaan yihiin oo iyaga ayaa dhexdooda is-naqdiya, aaraa’bay isku qabtaan dhexdooda. Saleebaan-na wax naga dhaxeeya oo colaad gaar ahi ma jirto oo waa Guddoomiyihii Golaha Guurtida, in aanu wada shaqayno waanu ku qasbanahay, wada-shaqaynta Shirguddoonnada Golayaashu maaha arrin aanu dooranayno ee waajib Dastuuri ah. Dagaal naga dhaxeeya Golaha guurtida iyo ka kaleba (Wakiilada) oo aan ogahay ma jirto.” Ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale.
Dhawaanahan waxa Golaha guurtida laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ay Mudanayaal taageersan Siyaasadda Madaxweyne Rayaale, hase ahaatee, u muuqda kuwo diyaar u ah inay fuliyaan mabda’ ah in xilka laga qaado Guddoomiye Saleebaan, iyada oo aanay tallaabadaasi wax kala-qaybsanaan ah ku keenin golahaas, kuwaas oo soo jeediyay in wax-ka-bedel lagu sameeyo Xeer-hoosaadka Golaha. Hase yeeshee, Shirguddoonka Golahaas ayaa qodobkaa ka saaray Ajandaha kalfadhiga cusub ee Golaha, si aanu khilaaf u abuurin.